15 Statistics na otu oge nlebara anya dị egwu bụ Digital Digital gị | Martech Zone
M na-asụ ude ntakịrị mgbe ndị ọkachamara ụlọ ọrụ na-aga n'ihu maka obere snippets pere mpe ma pere mpe, ọdịnaya dị ngwa na ngwa ngwa, vidiyo dị nkenke ma dị mkpụmkpụ, ihe ọsọ ọsọ na ọsọ ọsọ. Ọ na-enye nsogbu n'ihi na ọ lekwasịrị anya na omume niile ma ọ bụghị maka omume nke ndị na-ege gị ntị. N'ezie, ọ bụrụ na m ga-azụta mpempe akwụkwọ nbipute n'ịntanetị - Achọrọ m ịchọta ihe m chọrọ ngwa ngwa, lee ozi ahụ, wee lelee. Mana ọ bụrụ na m na-azụta ngwa ahịa azụmaahịa ọhụụ, aga m achọ nyocha ọkwado nkwado m matara ga-achọ ogologo anya ịgụ ihe, ilele, nyocha, wdg.
Mkparịta ụka ọzọ m ga-akwagide bụ na ọnụọgụgụ na-agbadata dị ala naanị n'ihi na ndị ọbịa enweghị ike ịchọta ihe ha chọrọ, na-abịarute na mberede, ma ọ bụ na ọ bụghị ọbụna mmadụ ọ bụla - ha bụ bot. Cheedị ma ị nwere ike nyochaa ọnụ ọgụgụ maka atụmanya ruru eru na saịtị gị. Ndị ọbịa nwere ike ma ọ bụ zụta ma ọ bụrụ na enyere ha ohere. Obi siri m ike na ọnụọgụ ọnụọgụ dijitalụ agaghị ele oke anya dị ka ha dị na infographic a.
Dika nlebara anya web na ulo oru ego, Chartbeat, 55% nke nlele ibe weebụ na-enweta ihe na-erughị 15 sekọnd. Maka ụdị, nke a pụtara na enwere windo pere mpe nke ohere ịdọta uche: Ha nwere oge. Ha aghaghi ime ka oge obula site na delivernye 'afọ ojuju dijitalụ ozugbo' - ahụmịhe ahịa kachasị mma n'otu ntabi anya. Ọdịnaya abụkwaghị eze, ugbu a ọ bụ oge dị mkpa. Brian Rigney, onye isi oche nke Zmags
Na see okwu bụ site infographic… na ọ na-eme m iru ala. Ọdịnaya ka bụ eze, ọ dị nnọọ ka a kpọtụrụ ya n'ụzọ kachasị dị irè ma dị irè. Ọsọ enweghị ozi n’ezie enweghị isi ma ọlị. Enwere m ike ichikota ihe nkiri dị ịtụnanya na 1 nkeji, mana ọ nweghị onye ga-akwụ ụgwọ maka nke ahụ. Ndị na-eri ihe ga-akwụ ụgwọ $ 15 iji nweta ihe nkiri ahụ.
Anaghị m akụ aka n'ihu nke infographic na m chọrọ ịkọrọ ya ebe a n'ihi na ọsọ bụ a dị oké egwu akụrụngwa nke ọ bụla dijitalụ ahụmahụ. Zmags dị n'ụzọ ziri ezi - anyị kwesịrị ịdị na-ebugharị envelopu mgbe niile na ịnye ndị ọbịa anyị ahụmịhe nke onye ọrụ ebe izipu ozi dị mfe ịchọta ma kesaa n'ụzọ dị nkenke n'ụzọ kachasị nso. Ihe ọ bụla ọzọ ma ị ga-efunahụ ndị na-ege gị ntị ruru eru.
Akụkụ dị n'akụkụ… ma na-akpa ọchị. M kachasị ihe oyiyi infographic n'okpuru na ọ na-ebu 17% ngwa ngwa. Hehe.
Nwere ike ibudata akwụkwọ Zmags, Mastering Marketing na oge ịmụta isi azum n'ihi na akada n'ji ntị.
Tags: anyaanya stats statsBrian Rigneyọnụ ọgụgụ omume ndị ahịaọnụ ọgụgụ ndị ahịaọnụọgụ omume na ntanetịihu peejiọsọọnụ ọgụgụZmags